“Raharaha kidnapping” : voasambotry ny “Saka mainty” teny Manjakaray i Stéphanie | NewsMada
“Raharaha kidnapping” : voasambotry ny “Saka mainty” teny Manjakaray i Stéphanie
Iray volana taty aorian’ny nivoahan’ny filazana fikarohana (avis de recherché), navoakan’ny sampam-pikarohana momba ny heloka bevava (BC), voasambotry ny polisy, tetsy Manjakaray, omaly maraina, i Roger Lala Stéphanie. Ilay vehivavy voarohirohy sady nalaza be tamin’ireny “raharaha kidnapping”, tany Toamasina, farany teo ireny.
Ny polisin’ny USI na ny “saka mainty” no nahasambotra azy ity tamin’io maraina io. Araka ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana, avy tamin’ny alalan’ny angom-baovao azon’ny polisy nahafantarana ny fisian’io ramatoa malaza amin’ny raharaha fakana an-keriny io teny an-toerana. Efa tamin’ny 3 ora maraina no niandry teny amin’ny manodidina ny USI. Nipoitra avy any tokoa ity ramatoa nandrasana tamin’ny 7 ora maraina, nitondra sakasoy sy poketra an-tanana. Nanantona moramora ny polisy nisambotra azy. Tsy sahy namaly izy io fa nanaraka fotsiny izay natao azy, raha ny fanazavana azo.
Rehefa nosavaina ny tao anatin’ny sakaosy, nahitana finday avo lenta, akanjo maro sy fidiovana ary solovolo. Nifitsaka teo anoloan’ny “saka mainty” ity ramatoa nokarohina ela tamin’ny raharaha fakana an-keriny ity. Natolotra ny polisy BC Anosy avy hatrany i Stéphanie taorian’ny fahasamborana azy. Nandray an-tanana ny famotorana ireto farany, ary ao anatin’ny asa tsy niandriandry amin’ny famotorana an-dramatoa. Mihevitra ny hahazo vaovao amin’ity vehivavy ity ny rehetra, izay mbola misy olon-kafa karohina, toy ny vehivavy antsoina hoe Ikalanoro, mpimasin’ireo mpanao kidnapping. Tsy mbola hita ity farany hatramin’izao.
Nangina ny momba ilay mpitsara
Ny 22 janoary lasa teo no nivoahan’ity taratasy fampikarohana an’i Stéphanie, ary izao tratra omaly izao izy. Izany hoe iray volana katroka mihitsy nikarohana azy. Efa nangingina tanteraka ny raharaha momba ny kidnapping tao anatin’izay iray volana izay. Nipongatra tampoka izany, ary heverina fa hamohafoha indray ity raharaha saro-pady mahasaringotra olona maro sy nampiaka-peo ny mpitsara. Aiza ho aiza tokoa ny momba ilay mpitsara tafiditra amin’ity resaka fakana an-keriny ity? Raha ny vaovao farany, tazonina any Manjakandriana ny tenany rehefa natolotra ny fitsarana ambony indroa miantaona. Tsy mbola nisy nipiaka momba azy ity sy izay ho tohin’ny raharaha momba azy.
Eo ihany koa ireo basy sarona nandritra ny fisavana sy fisamborana mpanao kidnapping tany Toamasina ny volana janoary lasa teo. Nilaza tamin’izany ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny mpitandro filaminana fa efa fantatra ny momba ireo basy ary hivoaka tsy ho ela ny vaovao manodidina izany. Tsy mbola nisy anefa izany mandraka ankehitriny. Amin’izao fahatrarana an’i Stéphanie izao , mihevitra ny maro fa hisy amin’izay ny fanononana anarana olona ambony. Misy rahateo ny mpanao politika tafiditra amin’ity raharaha ity, rah any famafisana azo.
Une réponse à "“Raharaha kidnapping” : voasambotry ny “Saka mainty” teny Manjakaray i Stéphanie"
nirina 24/02/2016 à 13:04
Aoka ho sazy farany izay henjana no omena azy , efa ela anié no nanaovany io asa rtsy io, fa tsy misy ny raha mahazo azy, satria manana mpiaro matanjaka , ataovy ny asanareo ry mpitsara satia efa tsya atokisan’olo koa nareo raha mbola votsoranareo maimaimpona io demony lava tandroka io